WINE 6.2 Inosvitsa Mono 6.0 uye Mazana eUsual Enhancements | Linux Vakapindwa muropa
WINE 6.2 inosvitsa Mono 6.0 uye akajairwa mazana ezviwedzero mukuburitswa kwekuburitsa
Mushure me yekutanga vhezheni vhezheni masvondo maviri apfuura, WineHQ ichaburitsa imwe 21-22 yeiyi nhepfenyuro. Izvi zvinotevera zvakaburitswa maawa mashoma apfuura, a WAINI 6.2 iyo, semhando dzese dzakaburitswa vhiki mbiri dzese, inouya nemazana ezvimedu zvidiki, asi zvakare zvimwe zvakakosha, seNET Sisitimu yekutsigira injini yakagadziridzwa ku Tsoko 6.0. Izvi zvichaita maapplication anoshandisa tekinoroji yeMicrosoft iyi kuti inyatsoshanda zvirinani.
Nezve izvo zvinowanzoitika shanduko, WineHQ inotaura kuti 51 bugs yakagadziriswa uye yakazara ye 332 kuchinja. Rondedzero izere inowanikwa pa kusunungura chinyorwa, apo vagadziri vanowanzo taura 4 kana 5 avo, senge yekuvandudza kweMono injini kune yayo yechitanhatu vhezheni. Ipapo une runyorwa rudiki irworwo, mune imwe yemapoinzi ndiyo yakajairwa "bug fixes".
WINE 6.2 inosimbisa
Mono injini yakagadziridzwa kuita vhezheni 6.0.0, iine DirectX rutsigiro.
Tsigiro yeNTDLL yekugadzirisa APIs.
Yakawanda WinRT rutsigiro muWIDL.
Xbox One controller inogadzirisa paMac.
Vashandisi vanofarira izvozvi vanogona kuisa WINE 6.2 kubva kune yayo kodhi kodhi, inowanikwa mukati izvi y iyi imwe link, kana kubva pamabhinari anogona kutorwa pasi kubva ku pano. Mune iyi link kubva kwatinga dhawunirodha mabhinari pane zvakare ruzivo rwekuwedzera iyo yepamutemo chirongwa repositi kuti ugamuchire izvi uye nezvimwe zvichavandudzwa mune ramangwana pavanongogadzirira masystem senge Ubuntu / Debian kana Fedora, asi kune zvekare mavhezheni e Android uye macOS.
Iyo inotevera yekuvandudza vhezheni ichave WINE 6.3 uye, kana pasina zvinoshamisa, izvo zvandinotarisira kufambisira mberi izvo zvisingaitike ndichiona kubata nguva kwavanoita muWineHQ, ichasvika muna Kukadzi 26. Pakati pezvauchasuma, chinhu chega chatinogona kukuvimbisa ndechekuti ichauya nemazana ediki ekuvandudza uye kugadzirisa sekugara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » WINE 6.2 inosvitsa Mono 6.0 uye akajairwa mazana ezviwedzero mukuburitswa kwekuburitsa